Game | Delo Delo
၂၀၁၂ ခုနှစ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး PS3 ဂိမ်းများ	Posted on December 20, 2012 | No Comments
Playstation ဘဝကနေစပြီး တဖြည်းဖြည်း အင်အားကြီးမားလာတဲ့ ဆိုနီရဲ့ PS3 ဟာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာလည်း တခြား လက်ကိုင်ဂိမ်းစက်တွေကို ကျော်လွန်အောင်ပွဲခံနေဆဲပါ။ PS3 ဂိမ်းတွေထဲက အကောင်းဆုံးလို့ ရွေးချယ်ထားတဲ့ ဂိမ်းတွေကို စုစည်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ Final Fantasy XIII-2 Final Fantasy ဂိမ်းတွေရဲ့ မရိုးနိုင်တဲ့ ဂရပ်ဖစ်နဲ့ သီချင်းပိုင်းက ဒီဂိမ်းကို အကောင်းဆုံးတွေထဲက တစ်ခု...	Continue Reading...	၂၀၁၂ ခုနှစ်ရဲ့ အကောင်းဆုံးဂိမ်း League of Legends	Posted on December 5, 2012 | 1 Comment
League of Legends ဆိုတာ League of Legends ဆိုတာ Warcraft III ရဲ့ နာမည်ကျော် မြေပုံ Defense of the Ancients (DotA) ကနေ ခွဲထွက်လာခဲ့တဲ့ ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ မူလ DotA ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် Steve “Guinsoo” Feak ဟာ DotA...	Continue Reading...	The Force is Strong – Angry Birds Star Wars	Posted on November 10, 2012 | 1 Comment
Luke Skywalker ၊ Han Solo နဲ့ Ben Kenobi တို့ဟာ အာကာသတိုက်ပွဲတွေအတွက် တကျော့ပြန် အဆင်သင့် ဖြစ်နေကြပါပြီ။ သူတို့ဟာ Stormtrooper တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ဖို့ ချီတက်နေကြပါပြီ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကို လူအနေနဲ့ မြင်တွေ့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Angry Bird ဂိမ်းရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် ဗားရှင်းဖြစ်တဲ့ Angry Birds...	Continue Reading...	Hotel Transylvania	Posted on October 4, 2012 | No Comments
Adam Sandler နဲ့ Selena Gomez တို့ နောက်ခံအသံ သရုပ်ဆောင်ပေးထားတဲ့ Hotel Transylvania ဇာတ်ကားကို Nintendo 3DS အတွက် ပြန်လည် အသက်သွင်းလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရုပ်ရှင်ကနေ ဂိမ်းအဖြစ် ကူးပြောင်းလာတဲ့ အခြားဂိမ်းတွေနဲ့မတူပဲ ကုန်ကျစရိတ်နည်းနည်း၊ အချိန်တိုတိုနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ ဒီဂိမ်းဟာ သူ့ထက်အရင် ရှေးကျတဲ့ Castlevania ရဲ့ ပုံစံကို...	Continue Reading...	၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး ကွန်ပြူတာဂိမ်းများ	Posted on July 8, 2012 | No Comments
PS3 တို့ Xbox 360 တိုနဲ့ ယှဉ်ရင် တစ်ကိုယ်ရေသုံး ကွန်ပြူတာတွေဟာ ဂိမ်းဘက်ပိုင်းမှာ စွမ်းဆောင်ရည် နောက်ကျကျန်နေခဲ့တာ တော်တော်ကြာပါပြီ။ ဒါပေမယ့် အဆက်မပြတ် တိုးတက်နေတဲ့ ကွန်ပြူတာပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သူများကြောင့် ကွန်ပြူတာဂိမ်းတွေဟာလည်း အဆက်မပြတ် ဆက်လက်တိုးတက်နေတုန်းပါပဲ။ အထူးသဖြင့် အရမ်းချောမွေ့ပြီး တောက်ပလှပနေတဲ့ ပုံရိပ်တွေ ဖန်တီးရာမှာ ကွန်ပြူတာဂိမ်းတွေဟာ အထူးအားသာနေဆဲပါပဲ။ တချို့ဂိမ်းတွေကို လက်ကိုင်ဂိမ်းစက်တွေရဲ့ ပုံစံအတိုင်း...	Continue Reading...	World of Warcraft မိတ်ဆက်	Posted on March 26, 2012 | No Comments
Computer game တစ်ခု အနေနဲ့သာမကဘဲ social phenomenon တစ်ခု အဖြစ်ပါပြောင်းလဲလာတဲ့ World of Warcraft ကို ကစားတဲ့သူ ပိုများလာပါတယ်။ World of Warcraft ရဲ့ ခမ်းနားကြီးကျယ်မှုကို ပြသနိုင်တာကတော့ မယုံနိုင်စရာများပြားတဲ့ ကစားသူ အရေအတွက်ပါပဲ။ Subscribe လုပ်ထားတဲ့ ကစားသမား ၁၁သန်း ဆိုတာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးဆုံးမြို့ကြီးလေးမြို့ရဲ့...	Continue Reading...	Limbo	Posted on February 20, 2012 | No Comments
ပထမစစချင်း အခန်းမှာတင် သင့်ကို အိပ်မက်ဆိုးတွေ ပြည့်နှက်နေတဲ့ ကမ္ဘာတစ်ခုကို ရောက်ရှိနေသလို ခံစားနေရမှာ အသေအချာပါပဲ။	Continue Reading...	Home Front	Posted on January 8, 2012 | No Comments
Publisher: THQ Developer: Digital Extremes Genre: Action Release Date: Mar 15, 2011 (more) ESRB: Mature ESRB Descriptors: Blood, Violence, Strong Language Game rating : 7.5 Bad : Very short campaign ends abruptly ဂိမ်း review လေး မပြောပြခင် ဂိမ်မာတွေကို...	Continue Reading...	Dota2 လာချေပြီ	Posted on September 12, 2011 | No Comments
ကမ္ဘာ့ဂိမ်းလောကမှာ ဒီနှစ်အတွက် အလှုပ်ခတ်ဆုံး သတင်းတစ်ပုဒ် ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်နေ့ ဂျာမနီနိုင်ငံ ကိုလုန်းမြို့မှာ ကျင်းပသွားတဲ့ “The International” Dota2 ပြိုင်ပွဲကြီးကြောင့် ပါပဲ။ အသင်းပေါင်း ၁၆ သင်း ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပြီး ယူကရိန်းနိုင်ငံက Na’Vi က သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့ ဗိုလ်လုပွဲမှာ ဒုတိယဆုရ တရုတ်နိုင်ငံက...	Continue Reading...	၂၀၁၁ ခုနှစ်ရဲ့ ပထမ ၆ လအတွင်း အကောင်းဆုံးဂိမ်းများ – ၅	Posted on August 9, 2011 | No Comments
၂၊ Little Big Planet2[PS3] Littel Big Planet2ဟာ ယနေ့ခေတ် အခြား ဂိမ်းအမျိုးအစားတွေလို မဟုတ်ပဲ လိုချင်တဲ့ အနေအထားကို တိုက်ရိုက် ဖော်ထုတ်ထားတဲ့ဂိမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမ Little Big Planet နဲ့ ဆင်တူသလိုလို ရှိပေမယ့် ပိုမိုများပြားတဲ့ ကာရိုက်တာပုံစံများကို ဖန်တီးနိုင်ခွင့်ရရှိသလို...	Continue Reading...	၂၀၁၁ ခုနှစ်ရဲ့ ပထမ ၆ လအတွင်း အကောင်းဆုံးဂိမ်းများ – ၄	Posted on July 22, 2011 | No Comments
၄၊ LA Noire [PS3, Xbox 360] ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကာစ ၁၉၄၇ ခုနှစ် Los Angeles မြို့က စစ်ပြန် ရဲဝန်ထမ်းသစ် Cole Phelps ဟာ မျှော်လင့်မထားတဲ့ အခြေအနေတွေကို စတင်ရင်ဆိုင်ရပါတယ်။ မြောက်မြားလှစွာသော အမှုတွေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမယ်။ အထက်အရာရှိက ကျေနပ်ရင် ရာထူးတက်မယ်။ မကျေနပ်ရင် ရာထူးလျှောမယ်။ ကြောက်မက်ဖွယ် ကောင်းတဲ့...	Continue Reading...	၂၀၁၁ ခုနှစ်ရဲ့ ပထမ ၆ လအတွင်း အကောင်းဆုံးဂိမ်းများ – ၃	Posted on July 13, 2011 | No Comments
၆၊ The Witcher 2: Assassins of Kings [PC] စတင်ဖြန့်ချိကာစက ပြဿနာပေါင်းစုံနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး အတော်လေး အထစ်အငေါ့ ရှိခဲ့ပေမယ့် ဒီနှစ်ရဲ့ အကောင်းဆုံးဂိမ်းတွေ စာရင်းမှာ The Witcher2ကိုလည်း ချန်ထားခဲ့လို့မရပါဘူး။ ခဏခဏ စက်ပြုတ်ကျတဲ့ ပြဿနာ၊ Stable မဖြစ်တဲ့ ပြဿနာ၊ Game Launcher...	Continue Reading...	Page 1 of 212»